भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसमविद्को आग्रह – Everest Dainik – News from Nepal
भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसमविद्को आग्रह
काठमाडौ‌, साउन १९ । नेपालका कतिपय स्थानमा आगामी तीन दिन भारी वर्षाको सम्भावना छ । अधिकांश भेगमा भने सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार, मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभागबाट नेपाल भित्रने क्रममा देखिएको छ । मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले शनिबार तराईको सिराहा, सप्तरी जनकपुर क्षेत्र तथा चितवन, भैरहवा आसपास बिहानैदेखि हल्का वर्षा भएको बताए ।
त्यस्तै, पूर्वी पहाडी र पश्चिमका केही भेगमा मौसम बदलीको अवस्था छ । देशभर वर्षाको ठूलो प्रणालीको विकास भएको छैन । तर एक दुई स्थानमा भने मनसुनी वायु र स्थानीय वायुको मिश्रणले भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको अर्यालले बताए ।
वर्षा कम हुँदा देशका उच्च, मध्यम र साना नदीमा बहाव सतर्कता तहभन्दा तल नै रहने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार, सिन्धुली, गोरखा, दाङ, रुकुम रोल्पा, लमजुङ, पाल्पा, स्याङ्जा, पश्चिम राप्ती, बबईलगायतका नदीको बहाव न्यून रहनेछ । तर त्यस आसपासका साना नदीमा आकस्मिक रूपमा बाढी आउने सम्भावना रहेको छ ।
ट्याग्स: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, वर्षा
सुत्केरी बिदा नदिएको भन्दै प्रधानाध्यापक प्रहरी नियन्त्रणमा
कबड्डी कबड्डी कबड्डीले २ दिनमा कति कमायो?
फेरी नखेल्ने भए धोनी, सन्यासबारे यस्तो प्रतिक्रिया
शालिकराम आत्महत्या प्रकरणः वादी र प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र शुरु
मापसे गराइ अर्धचेत अवस्थामा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार !
महँगिने भयो दशैँ, प्याजमा मात्रै १६० प्रतिशत मूल्यवृद्धि
मन्त्री अर्यालको आग्रहः ‘कागज मिलाउनेलाई होइन काम गर्नेलाई योजना दिनुस्’